Sonwabile Ekukhonzeni UYehova Nakuba Singamahlwempu | Ibali Lobomi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Sonwabile Ekukhonzeni UYehova Nakuba Singamahlwempu
Kubalisa UAlexander Ursu
Utatomkhulu notata babehlala kwindlu engagqitywanga ukwakhiwa eCotiujeni, kwilali yamahlwempu kumntla wendawo ngoku ekuthiwa yiMoldova. Ndazalelwa apho ngoDisemba ka-1939. Ekuqaleni kweminyaka ye-1930, baba ngamaNgqina kaYehova. Emva kokuba umama ebonile ukuba utatomkhulu uyazi iBhayibhile ngaphezu komfundisi wale lali, naye waba liNgqina.
Xa ndandineminyaka emithathu, utata, umalume kunye notatomkhulu basiwa kwiinkampu ekusetyenzwa nzima kuzo ngenxa yokuba bebambelele kwimigaqo yobuKristu. Ngo-1947, emva kweMfazwe Yehlabathi II, ngutata kuphela owabuyela ekhaya ephila nakuba wayephuke umqolo. Nangona wayeyiloo ngxwelerha, wayesabambelele elukholweni.
UBOMI BETHU BATSHINTSHA NGESIQUPHE
Xa ndandineminyaka esithoba, intsapho yasekhaya namanye amaNgqina amaninzi aseMoldova athunyelwa elubhacweni eSiberia. NgoJulayi 6, 1949, sakhweliswa kumakhareji alayisha iinkomo. Emva kohambo lweentsuku eziyi-12, oluziikhilomitha ezingaphezu kweziyi-6 400, samisa kwisitishi sikaloliwe saseLebyazhe. Safika apho silindwe ngabasemagunyeni. Sahlulwa saba ngamaqela amancinane saza sasasazwa kuloo mmandla. Elethu iqela lahlaliswa kwisikolo esingasasetyenziswayo. Sasidiniwe yaye silusizi ngokwenene apho. Omnye umama waculela ezantsi ingoma eyaqanjwa ngamaNgqina ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Singalibazisanga sonke samlandela ngala mazwi:
“Abazalwana abaninzi basiwa kude elubhacweni.
Basiwa emntla nasempuma.
Ngenxa yokwenza umsebenzi kaThixo, batyhubela ubunzima yaye banyamezela iimvavanyo ezinzima.”
Ekuhambeni kwexesha sakwazi ukuya ezintlanganisweni ngeeCawa kwindawo ekumgama omalunga neekhilomitha eziyi-13 ukusuka apho sasihlala khona. Sasisoloko sivuka ngonyezi kuloo ngqele yasebusika size sinyuke kwikhephu elithe gabhu ezinqeni kwiqondo lobushushu elingaphantsi kuka-40 ngokukaCelsius. Sasixinana kwigumbi elincinane singabantu abayi-50 nangaphezulu. Sasiqala ngokuvuma ingoma enye, nezimbini nezintathu, kuthandazwe kuze kuxutyushwe iBhayibhile kangangeyure. Sasiphinda sicule ezinye iingoma kuze kuxutyushwe eminye imibuzo yeBhayibhile. Oko kwakulomeleza ngokwenene ukholo lwethu.
EZINYE IINGXAKI ESADIBANA NAZO
Kwisitishi sikaloliwe eDzhankoy, malunga no-1974
Ngo-1960 amaNgqina awayesiwe elubhacweni akhululwa. Nangona sasihlupheka, ndakwazi ukuya eMoldova, apho ndafika ndadibana noNina, owayenabazali nomakhulu notatomkhulu abangamaNgqina. Satshata saza sabuyela eSiberia, apho intombi yethu uDina yazalelwa khona ngo-1964, saza ngo-1966 salekelisa ngonyana wethu uViktor. Kwiminyaka emibini emva koko, safudukela eUkraine saza sahlala kwindlu encinane kwisixeko saseDzhankoy, esikumgama omalunga neekhilomitha eziyi-160 ukusuka eYalta, ekusingasiqithi iCrimea.
ECrimea, umsebenzi wamaNgqina kaYehova wawuvaliwe, njengoko ayesasasazeke eSoviet Union, kodwa kwakungekho mithetho ingqongqo kuthi yaye sasingatshutshiswa ngendlela ecacileyo. Amanye amaNgqina aqalisa ukuyekelela umxakatho. Ayesithi ekubeni ehlupheke gqitha eSiberia, ngoku kufuneka asebenze nzima ukuze aphile tofotofo.
NgoMatshi 27, 1991, umsebenzi wethu wokushumayela wamkelwa ngokusemthethweni kwilizwe elalisakuba yiSoviet Union. Ngoko nangoko kwenziwa amalungiselelo eendibano zeentsuku ezimbini kwiindawo ezisixhenxe zakweli. Thina sasiza kuya kweseOdessa, eUkraine, eyayiza kuqala ngoAgasti 24. Ndafika kwinyanga ngaphambi koko ukuze ndincedise ekucoceni ibala lebhola elaliza kuba nendibano.
Ekubeni sasisebenza imini yonke, ebusuku sasisoloko silala kwizitulo zelo bala. Amaqela oodade ayecoca indawo yokupaka iimoto. Kwalahlwa inkunkuma emalunga neetoni eziyi-70. Abo babesebenza kwisebe lamagumbi, babezula kweso sixeko bekhangela iindawo zokuhlala iindwendwe ezazilindelwe eziyi-15 000. Singalindelanga, seva iindaba ezothusayo!
NgoAgasti 19—kwiintsuku ezintlanu ngaphambi kokuqalisa kwendibano—uMikhail Gorbachev owayengumongameli waseUSSR wabanjwa ngoxa wayeseholideyini kufuphi neYalta, engekude kangako kwindawo esasikuyo. Sohluthwa nemvume esasiyifumene yokuba nendibano. Iindwendwe zaye zafowunela kwiofisi yendibano zibuza, “Sithini ke ngamatikiti ebhasi nakaloliwe esesiwathengile?” Emva kwemithandazo emininzi, abo babelungiselela indibano bathi, “Yizani!”
Asizange siyeke ukuthandaza nokulungiselela indibano. Iindwendwe ezazisuka eSoviet Union zasiwa kwiindawo eziza kulala kuzo. Ntsasa nganye, abazalwana abakwiKomiti yeNdibano babehamba baye kuthethathethana nabasemagunyeni. Busuku ngabunye, babebuya nemband’ esikhova.
IMITHANDAZO YETHU IYAPHENDULWA
NgoLwesine, ngoAgasti 22—usuku ngaphambi kokuba kuqalise indibano—abazalwana abakwiKomiti yeNdibano babuya neendaba ezivuyisayo: Indibano iza kubakho! Sasivuya ngokwenene njengoko sasicula ingoma yokuvula kwaza kwathandazwa. Emva kokuphuma kwendibano ngoMgqibelo, sasisehla sisenyuka, sincokola nezihlobo esazigqibela kudala. Sasincokola namaKristu anokholo olomeleleyo atyhubele aza anyamezela ezona mvavanyo zinzima.
Indibano yaseOdessa, ngo-1991
Kwiminyaka eyi-22 emva kwaloo ndibano, intlangano yamaNgqina yaqhubela phambili ngokwenene. Kwakhiwa iiHolo zoBukumkani kulo lonke elaseUkraine, nabavakalisi boBukumkani banda besuka kwabayi-25 000 ngo-1991 yaye ngoku bangaphezu kwe-150 000!
SISONWABILE EKUKHONZENI UYEHOVA
Intsapho yethu isahlala kulaa ndlu yayifikele kuyo eDzhankoy, ngoku esisixeko esinabantu abamalunga ne-40 000. Nangona kwakukho iqaqobana leentsapho zamaNgqina ukufika kwethu sivela eSiberia ngo-1968, ngoku kukho amabandla amathandathu.
Nathi siyintsapho enkulu ngoku. Sizizizukulwana ezine ezikhonza uYehova—abantwana bethu, abantwana babo nabantwana babantwana babo.